Golaha Wasiirada Soomaaliya iyo Saraakiisha amaanka oo soo saarey go’aano lagu dardargalinayo Amniga Muqdisho – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Wasiirka Amniga Soomaaliya Xil. Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) Taliyaha Ciidanka Xooga dalka Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale (Cirfiid) Taliyaha Nabad Sugida iyo sirdoonka qaranka Cabdullahi Maxamed Cali(Sanbaloolshe), iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaliyeed Gen. Cabdixakiin Daahir Saciid (Saacid) oo shir jaraa’id ku qabtey xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya ayaa soo saarey go’aamo lagu sugayo amniga caasumada Muqdisho iyo guud ahaan dalka.
Inaan la ogaleyn qof aan ka tirsaneen Ciidanka xooga dalka Soomaaliya inuu ku labisto dharka Tuutaha oo calaamad u ah CXD Soomaaliya.
Inaan Hub ama Qori lagu dhex qaadan karin magaalada marka laga reebo ciidanka xasilinta amaanka Muqdisho.
Gaadiidka xooga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu amrey iney qaataan cadeynta dhaqdhaqaaqa Gaadiidka, si loo ogaado inuu baabuurkaasi shaqo u socdo.
In aan Cid loogu turin Howlgalada Xasilinta Caasimada iyo Hub ka dhigista cidii ka hor timaadana talaabo Sharciga waafaqsan laga qaadayo.
In la baneeyo lagana baxo guryaha ay leeyihiin Ciidamada Xooga dalka ee ku yaalla Muqdisho 1 Julaayo ka dib Shacab laguma arki karo Guryaha Ciidamada Xooga.